शरिरका यी अंङ्ग ठुला हुने महिला साह्रै भाग्यशाली हुन्छन ! -
शरिरका यी अंङ्ग ठुला हुने महिला साह्रै भाग्यशाली हुन्छन !
November 19, 2020 chothale
हिन्दु धर्ममा महिलालाई सौभाग्यशाली र लक्ष्मीको रूप मानिन्छ । आज हामी महिलाहरूको बारेमा केही यस्ता रहस्य उल्लेख गर्दैछौँ, जो शायद तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ । महिलाहरूको हरेक अंगमा उनीहरूको कुनै न कुनै रहस्य लुकेको हुन्छ । महिलाहरूको हरेक अंगले उनीहरूको स्वभावको बारेमा केही दर्शाउँछ ।पुराणमा पनि महिलाहरूको केही अंगहरूलाई भाग्यशाली भनिएको छ ।
आज हामी महिलाहरूको ती अंगको बारेमा चर्चा गर्दैछौं, जुन ठूलो भएमा महिलाहरूलाई भाग्यशाली भनिन्छ । ठूलो कान- जुन महिलाको कान ठूलो हुन्छ, उनीहरूको उमेर लामो हुन्छ र भाग्यशाली मानिन्छ । लामो कपाल- महिलाहरूको लामो कपाल भाग्यशाली हुनुको निशानी हो । लामो हात- जो महिलाको हात लामो हुन्छ, उनीहरूलाई सुख र ऐश्वर्य मिल्छ ।
लामो खुट्टा- लामो खुट्टा भएका महिलाहरूलाई लक्ष्मी समान शुभ मानिन्छ । ठूलो नाइटो- जो महिलाको नाइटो ठूलो र गहिरो र दायाँतर्फ मोडिएको हुन्छ भने उनीहरू धनवान र भाग्यशाली हुन्छन् । लामो घाँटी- जो महिलाको घाँटी लामो हुन्छ, उनीहरू परिवारको लागि धनवान र भाग्यशाली हुन्छन् ।
उमेरले ४० लागेपछि यस कारण जाग्छ फेरी बैस – बुडापाकाहरु को एउटा पुरानो भनाई गाउघरमा सुनिरहनु भएकै छ होला नि, चालिसे लागेछ बैस जागेछ । यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन् । बुडापाकाका अनुसार जीवनमा पहिलो पटक १६ वर्ष र दोस्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे । हाम्रो समाजमा कहिकतै महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहेको घटनाहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालले गर्दा एक अर्काको कुरामा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा ब्यस्त भएपछि उनीहरु आफ्नो मान्छे सँग दुर भए जस्तो आभास हुन्छ । परिवार आफन्छ छोडेर सामाजिक सञ्जालका मानिसहरु सँग सम्दै गर्दा उनीहरु सँग नै नजिक हुन्छन अनि सम्बन्धमा अनेक समस्याहरु आई पर्छन । त्यसैले गर्दा बाहिर जे भए पनि आफ्नो परिवारलाई पनि समय दिनुस ताकी तपाईको सम्बनधमा कुनै पनि चिसो नआईपरोस ।
November 26, 2020 chothale 0
सामाजिक संजाल यस्टो ठाँउ हो जहाँ अलिकती फरक कुराहरू एकछिनमै भाइरल भइहाल्छन् । झनै सुन्दर युवतीको...
काठमाडौं । हालै गरिएको एक अध्ययनले अनौठो खुलासा गरेको छ । नियमित भौ’तिक सुःख प्राप्त गरिरहेका...